Koriinka Maskaxda Iyo Kordhinta Xusuusta! - Xogside
Home BARNAAMIJYADA Koriinka Maskaxda Iyo Kordhinta Xusuusta!
Koriinka Maskaxda Iyo Kordhinta Xusuusta!
Shaki kuma jiro inuu kaluunku yahay mid aad faa’iido badan u leh, maxaa yeelay wax ku badan acid Omega iyo saliida kaluunka oo ah cuntooyinka ugu muhiimsan ee dhinac maskaxda. Kaluunka laftiisa ayaa usii kala wanagaasan dhinac maskaxada waxa ugu fiican noocyada : Salmon, Saradine, Tuna, Herring, Mackerel iyo Ansjos.
Khudaarta iyo midhaha ayaa iyana ah mid waxtar weyn u leh dhinac shaqada maskaxada . Waxaana ugu fiican khudrada noocyada Canabka, daba case, Mooska, Canbaha, tufaaxa, tamaandhada iwm.
Maskaxda 80%, waxa ay ka kooban tahay biyo, sidaa awgeed haddii aad biyo badan cabto waxa ay dhiireglinaysa shaqada maskaxda, waxa kale oo ay ka caawinaysa kana hortgeysa in masaxda qaliin lagaga sameeyo. Dhakhtarada cilmi baadhistan sameeyay ayaa ku taliyay in ugu yaraan aad maalintii cabto laba litir oo biyo ah .
Previous articleGolaha wakiillada Somaliland oo ansixiyay ajandaha kalfadhigii 1-aad ee golahaasi.
Next articleWaxa U Dhisay Dawlad Adag!